Amaxesha aphakathi kuSeptemba I. Iijarchas kunye neecantigas de amigo | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Imbali yoncwadi, Imibongo
Iyahamba le Inqaku lokuqala le Serie zinikezelwe kuthi Uncwadi lwamaxesha aphakathi. Ewe, le ngenye imini sasiyifunda kwimibhalo yeencwadi zesikolo, ekwakunzima ukuba siyiqonde kwaye ivakala ingaqhelekanga. Ewe, ndenza imithambo yokuzihlaziya kwaye ndiyifumane jarchas kunye necantigas de amigo, Oyena mmeli wakhe ungaphezulu yayingu-troubadour waseGalician UMartin Códax. Ekudluliseni ndikhumbula abambalwa abakhethiweyo.
2 ICantigas de amigo
Ezi Iingoma ezingaziwa eyavela kwifayile ye- Iinkulungwane ze-XI-XIII Ziivesi ngokubanzi umxholo wothando (Kukwakho nendumiso) ebeziyimibongo eyaziwayo. Baculwa ngu mozarabic (AmaKristu awayehlala kubukumkani bamaSilamsi baseAl-Andalus). Emva kwe- iimbongi zama-Arabhu baziqokelele ukongeza kwisiphelo sabo moyoxa (imibongo efundwe ngolwimi lwesiArabhu) ngokungathi zi ikorasi.
Zihlala zibaliswa ngu Ilizwi lomntu obhinqileyo iveza eyayo iimvakalelo ze uthando ngokuba othandekayo amaxesha amaninzi ubiza habib ("Mhlobo, sithandwa" ngesiArabhu). Y uhlala ebhekisa kunina okanye kudade wabo ukubuza okanye ukukhalaza ngokungabikho kolo thando.
ICantigas de amigo
Ukusuka kwi-XNUMXth-XNUMXth century, cantigas de amigo yaseGalician-Portuguese yabelana ngeempawu neejarchas: zikwanjalo thanda iingoma ngelizwi labasetyhini Ngubani oya ku "umhlobo" (yiyo loo nto ihlelo) abathetha ngalo kungekuphela ngoonina, oodade okanye abahlobo, kodwa nangabo izinto zendalo (amaza, ulwandle okanye imithi).
Kwaye zine iindidi:
Ungqungqile: yemvelaphi yemveli, bonisa uvuyoíukuthanda nokuphila, kwaye bayakumema ukuba udanise.
Marinas okanye ibarcarolas: iiCantigas ezithetha ngolwandle okanye apho intombazana ithetha nolwandle.
ICantigas de romaría (= uthandoíukuya): enxulumene romeríI-ace kunye nohambo lokuya ihermitages okanye iindawo ezingcwele, apho abathandi babedla ngokudibana khona okanye ukuthandana.
IAlbas: bathetha ngokwahlukanaón yabathandi kusasa.
Umqambi kunye ne-troubadour edumileyo yayinguGalician UMartin Códax, Waqamba isixhenxe ICantigas de Amigo ngenkulungwane ye-XNUMX.
Zithini iijarchas kunye neeCantigas ekwabelwana ngazo uphawu kunye ukulula Izinto ezininzi ezinjengezo zendalo, ngamanye amaxesha ezinothando okanye amaxabiso enkanuko. Nantsi eminye imizekelo:
Ndiza kwenza ntoni okanye ndiza kuba yintoni
oh sithandwa sam,
musa ukumka kum
Unothando kakhulu, unothando kakhulu,
mhlobo, lukhulu uthando!
Amehlo akhanyayo agula
kwaye zibuhlungu kakhulu!
Usizi lwam kukuba umntu onogonyamelo; ukuba ndithe ndaphuma
ayindivumeli ukuba ndishukume okanye ndiyacalulwa.
Mama, ndixelele ukuba ndiza kwenza ntoni.
Xa inkosi yam, oh zihlobo,
ndinike iyeza lakho?
Oh mama umhlobo wam
iyashiya kwaye ayibuzi!
Khawutsho ndizakwenza ntoni mama
ukuba usizi lwam alupheli.
Inkosi yam u-Ibrahim,
oh umnandi ndoda
Ukuba akunjalo, ukuba awufuni,
Ndiya kuya kuwe
Intliziyo yam iyandishiya
Oh Thixo! Ngaba iya kubuyela kum?
Kubi kakhulu (yintlungu yam engaqhelekanga
(ugula kangakanani (intliziyo yam), iza kuphola nini?
Amaza olwandle lwaseVigo
Amaza olwandle lwaseVigo,
Ubonile umhlobo wam?
Oh Thixo wam! Ngaba iza kufika kungekudala?
Amaza olwandle olulwayo
Ubonile sithandwa sam?
Ubonile umhlobo wam
Ubonile sthandwa sam,
ngubani ondikhathaze kangaka?
Usisi wam omhle
Usisi wam mhle, yiza nam
kwicawa yaseVigo, apho ulwandle lukhohlakeleyo.
Kwaye sizakuwabukela amaza, dade wethu mhle, eze ngokuzithandela
Kwicawa yaseVigo, apho ulwandle luvutha khona.
Kwaye siza kujonga amaza, kwicawa yaseVigo, apho ulwandle lukhohlakeleyo,
Uyakufika apho, mama, mhlobo wam
Kwaye siza kujonga amaza, kwicawa yaseVigo, apho ulwandle lunomsindo khona,
Uyakufika apho ke, mama, sithandwa sam
Kwaye siza kuwajonga amaza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Imibongo » Amaxesha aphakathi kuSeptemba I. Iijarchas kunye neecantigas de amigo